Isiqhingi sama-monotheists sifaneleka kakhulu kulabo abathanda ukuthula kwabo, imvelo kanye nolwandle. Sonke isiqhingi esingamahektha angu-2.2 sisesandleni sakho. Umakhelwane oseduze usesiqhingini esingumakhelwane. Okungcono kakhulu, isiqhingi siyindawo yokuhoxa, isikhathi sekhwalithi yothando sabashadikazi noma iholide lelanga lomndeni onabantwana. Isiqhingi esizimele asivamile ukutholakala ukuze siqashwe. Amakotishi amabili, imibhede yabantu abangu-4 + 2 + umatilasi, itende noma imali eyengeziwe 4 umuntu emkhunjini. Ezokuthutha 15e / umuntu / isiqondiso noma ungakwazi ukuqasha isikebhe esivulekile 65e / ngosuku.
Hlala ethafeni ngengilazi, phefumula, ube khona futhi uvumele ukugqolozela kwakho kuphumule kokunye kokushona kwelanga okumangalisayo eziqhingini. Izwa ukufudumala kwedwala ngaphansi kwezinzwane zakho ezingenalutho. Jabulela izibiliboco ze-grill entsha yokhuni kanye nesitimu esithambile se-log sauna, esiqinisekiswa isitofu se-Harvian Legend samakhilogremu angu-120. Zicwilise ekugoneni okupholisayo koLwandle i-Baltic kusukela ogwini oluyimfihlo olunesihlabathi futhi uzwe umphumela oyisimangaliso wamanzi emvula ezinweleni zakho. Izinsuku zichithwa uphumule endaweni yokuphumula elangeni noma ukuhlola isiqhingi ngesikebhe esigwedla i-Mutku. Kungani ungayi epikinikini esiqhingini esingumakhelwane esingenamuntu. Izingane ziyamangala lapho amadada edla ogwini kanye nama-seagull nama-tern axhuma esibhakabhakeni. Kungakhathaliseki ukuthi ungabona i-heron empunga, ukhozi lwasolwandle, impungushe, inyamazane noma inyamazane. Kukhona imidlalo yangaphandle esitokweni. Emvuleni, kune-Wi-Fi, i-TV, imidlalo yebhodi, izinto zokufaneleka kanye nomtapo wolwazi omncane. Beka inkanyezi emlilweni eziko, khanyisa ikhandlela futhi uphefumulelwe. Ukulala obumnandi esimweni sezulu sasolwandle kuyajatshulelwa endaweni yezivakashi indawo ye-Wild West-style log sauna. Amalungu amancane omndeni abhukha umbhede ongaphezulu wekotishi. Ungakwazi ngisho nokulala ku-hammock. Uma ufuna ukwandisa indawo yakho, thatha uhambo lwesikebhe uye ezindaweni zokudlela zasesiqhingini i-Odine noma i-St. Petersburg Yacht Club. Izindawo zokudlela ezisogwini kanye nazo zonke ezinye izinkonzo zase-Uusikaupunki nazo ziwuhambo olufushane nje. Lesi siqhingi sinamakotishi amabili, ishede lamapulangwe, indawo yokubeka izinkuni, izinsika ezimbili, indawo yokosa inyama, umuntu obhemayo, isonto elivulekile, isikebhe sokugwedla kanye netende labantu abangu-2-3. Awekho amanzi agelezayo. Umninikhaya unikeza amanzi okuphuza. Ukugeza kwenzeka olwandle nasemanzini emvula. Ku-sauna, amanzi ashisa ebhodweni. Ikotishi elikhulu linogesi welanga kanye nekhishi elisebenzayo, elihlangene. Amakotishi ashiswa yizindawo zokubasa izinkuni. Amathuba okuqasha isikebhe ukuze uthole indawo yokuhlala eyengeziwe yabantu abane. Umqashi uletha amashidi namathawula noma angawaqasha ngezindleko ezengeziwe.